साउन २, पाँचथर (अस) । पाँचथर जिल्लाको फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा उत्पादन भएको बन्दाले बजार नपाउँदा कृषक चिन्तित बनेका छन् । जिल्लाका कृषकले गाइभैसिको गोबर मात्रै प्रयोग गरेर तरकारी उत्पादन गर्ने गरका छन् । विषादी प्रयोग नगरिकनै उत्पादन गरेको बन्दा प्रतिकिलो ६ रुपैयामा बेच्नु परिरहेको स्थानीय कृषक मनकुम...
पहिरोले मेची राजमार्ग पनि अवरुद्ध
साउन २, पाँचथर । मेची राजमार्गअन्तर्गत राँके–फिदिम सडकखण्डमा पहिरो झरेपछि राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ । फाल्गुनन्द गाउँपालिका–३ को पाँग्रेभिरमा बुधवार राति वर्षासँगै पहिरो झरेपछि राजमार्ग अवरुद्ध भएको जिल्ला ट्राफिक कार्यालय पाँचथरका प्रमुख जनक तिम्सिनाले बताए । सडक माथिबाट ठूलो पहिरो झरेपछि यातायात आव...
न्यादी हाइड्रोपावरको विशेष साधारण सभा
साउन २, काठमाडौं (अस) । न्यादी हाइड्रोपावरको विशेष साधारण सभा साउन १७ गते कम्पनीको रजिष्टर कार्यालय बुद्धनगर बानेश्वरमा हुने भएको छ । कम्पनीको असार २९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले साधारण सभा गर्ने निर्णय गरेको हो । साधारण सभाको प्रस्तावमा कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संशोधन र शेयरको सार्व...
बीपीको कार्य सञ्चालनमा समस्या
धरान (अस) । धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कार्य सञ्चालनमा समस्या भएको छ । प्रतिष्ठानमा उपकुलपति नहुँदा दैनिक कामकारबाही, सेवा प्रवाह र आवको अन्तिम महीना भएकाले अडिटको काममा समेत असर परेको हो । घुस लिएको रकमसहित गत बिहीवार प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा. राजकुमार रौनियार पक्राउ...
तमोर कोरिडोरको लिम्बुनी पुल निर्माण सुस्त
सन्तोष पुर्कुटी ताप्लेजुङ । तमोर कोरिडोर अन्तर्गत ताप्लेजुङ र पाँचथर जोड्ने लिम्बुनी पुल निर्माण शुरू भएको डेढ वर्ष पुग्नै लाग्दा ५ प्रतिशत मात्र काम भएको छ । काम शुरू भएको १६ महीना पुग्दा एकातर्फको वेस राख्ने खाल्डो खन्ने काम अझै पूरा भएको छैन । २०७४ साल फागुन ६ गते पुल निर्माण शुरू भएको थियो । स...
बाढीले भारतबाट आउने मालवाहक सवारीसाधनमा अवरोध
विराटनगर (अस) । भारतको विहारस्थित मीरगञ्ज पुल बाढीले प्रभावित भएसँगै शनिवारदेखि मालवाहक ठूला सवारीसाधन नेपाल भित्रन सकेका छैनन् । विराटनगरस्थित भन्सार कार्यालयका अनुसार बाढीका कारण पुलमा क्षति पुग्न सक्ने बताउँदै भारतीय पक्षले सो पुलबाट ठूला सवारीसाधन नेपाल भित्रिन रोक लगाएको हो । कार्यालयका सूचना...
असार ३०, धरान (अस) । खाद्य उत्पादन गुणस्तरिय बनाउन तथा उपभोक्ताको स्वास्थ्य प्रति सजगता गराउन धरानका खाद्य व्यवसायीहरुलाई लेबलिङ सम्बन्धी अभिमुखीकरण गरिएको छ । सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघको संयोजनमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय सुनसरीले उक्त तालीम प्रदान गरेको हो । कार्यक्रममा खाद्य पदार्थ...
असार ३०, विराटनगर(अस) । केही दिनको अविरल वर्षापछि आएको बाढीका कारण भारतको बिहारस्थित मिरगञ्ज पुल प्रभावित भएसंगै शनिवारदेखि मालवाहक ठूला सवारीसाधन नेपाल भित्रिन सकेका छैनन् । विराटनगरस्थित भन्सार कार्यालयका अनुसार बाढीका कारण पुलमा क्षति पुग्न सक्ने जनाउदै भारतीय पक्षले सो पुलबाट ठूला सवारी साधनमा...
असार ३०, पाँचथर । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्गअन्तर्गत तमोर करिडोरको काम ६० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । पूर्वी पहाडलाई तराई र काठमाडौं जोड्ने द्रुतमार्ग तमोर करिडोरको ट्रयाक खोल्ने काम असोजसम्ममा सक्ने गरी भइरहेको निर्माण कम्पनीले बताएको छ । रू. ६ अर्ब २३ करोड ४९ लाख लागतमा वि...
विराटनगर (अस) । प्रदेश १ सरकारले मुलुक संघीयतामा गएपछि पहिलोपटक भाषा–साहित्य र कला क्षेत्रमा योगदान पु¥याउने एक दर्जन स्रष्टालाई नगदसहित सम्मान गरेको छ । आदिकवि भानुभक्त आचार्यको २०६ औं जन्म जयन्तीको अवसर पारेर सामाजिक विकास मन्त्रालयले भाषा–साहित्य र कला क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्‍याउने स्रष्टालाई...